Myanmar Market Journal
Choose Vol 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645
သိပံ္ပ၊ နှင့် သဘာဝ ၀န်းကျင်
IT News Update
အကြမ်းဖက်မှုနောက်ပိုင်း မောင်တောနယ်စပ်မှ ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ ဆယ်ခုလျော့ကျသွား
ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် .... 1051
USD 1 1.209
JPY 105.93 128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာတစ်ဘီလျံကျော် ရှာဖွေပေးနေသော ဗီယက်နမ်ကော်ဖီ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းသည် လွန်ခဲ့သော ၁ဝ နှစ်အတွင်း အခိုင်အမာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ရာ တစ်နှစ်လျှင် ပမာဏ အားဖြင့် တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၂ သန်းမှ ၁ ဒသမ ၅ သန်းအထိ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခဲ့သဖြင့် တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ မှ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကော်ဖီလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ တင်ပို့မှုသည် လယ်ယာကဏ္ဍ တင်ပို့ မှု၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိလာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် ကော်ဖီဒုတိယ အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချနေသော နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ရိုဘတ်စတာ (Robusta) အမျိုးအစား ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြည်ပတင်ပို့မှုတွင် ဦးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ သော် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင် ကော်ဖီ စေ့အဖြစ်သာ တင်ပို့မှုက အများဆုံး ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ပြင် ကော်ဖီထုတ် လုပ်မှု လုပ်ငန်းများမှာလည်း အသေးစား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများသာဖြစ်ပြီး ကော်ဖီပင်များမှာလည်း နှစ်ကြာလာသဖြင့် အိုမင်းလာမှု၊ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရာတွင် ညံ့ဖျင်းမှုနှင့် ခေတ်နောက်ကျသောနည်း စနစ်များကို သုံးစွဲနေမှု စသည့်ပြဿနာ အများ အပြားနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု သိရပါသည်။
''၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ် ဗီယက်နမ် ကော်ဖီလုပ်ငန်းကဏ္ဍ အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးရေး''ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကော်ဖီလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက ဟိုချီမင်းမြို့တော်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကော်ဖီ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေးနှင့် တန်ဖိုးတို့ကို မြှင့် တင်ပေးရန်အတွက် ဗီယက်နမ် ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ပြန်လည်ပြုပြင် လျက်ရှိကြောင်း ဗီယက်နမ် ကော်ဖီနှင့် ကိုကိုးအသင်း၏ ပြောကြားချက် ကို ဗီယက်နမ်နယူးသတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်အရ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးသည့် ဧရိယာခြောက်သိန်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော အပင်သစ်များကို စိုက်ပျိုးထားကြောင်း ထိုအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ လောင်ဗန်တူက ပြောပါသည်။
ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ် ရောက်လျှင် ကော်ဖီပို့ကုန် တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံမှ ၆ ဘီလီယံအထိ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိပြုပြင်ပြီး ကော်ဖီ ၁ဝ ရာခိုင် နှုန်းကို ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄ဝ ရာခိုင် နှုန်းအထိ ရရှိလာအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောပါသည်။
လက်ရှိ၌ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါးလက်ပြည်နယ်ရှိ ခရိုင် ၈ ခရိုင်တွင် ကော်ဖီစိုက် ဧရိယာ ဟက်တာ တစ်သိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော ကော်ဖီတန် ချိန် ၄၇၅ဝဝ အတွက် ဘန်မဲ သောက်ကော်ဖီအဖြစ် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အမှတ်အသား (Geographical Indication-GI) အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ဗီယက်နမ်အမျိုးသား ဥာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရုံးက အ တည်ပြုပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဘန်မဲသောက်သည် ဒါးလက်ပြည် နယ်ရှိ မြို့တစ်မြို့၏ အမည်ဖြစ်ပြီး ဘန်မဲသောက်ကော်ဖီအသင်းကို ဖွဲ့ စည်းထားရှိပါသည်။ ထိုမြို့တွင် ကော်ဖီစိုက်ဧရိယာ ဟက်တာ ၂ သိန်း ရှိပြီး နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှကော်ဖီတန်ချိန် ၄၅ဝဝဝဝ ထုတ်လုပ်၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅ဝဝ မှ ၆ဝဝ ခန့် ရရှိသည်ဟု သိရသည်။
ရိုက်တာ သတင်းဌာန၏ လေ့လာချက်အရ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ရိုဘတ်စတာကော်ဖီ၏ အရောင်းသည် ပရီမီယာ ကော်ဖီထက် မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရိုဘတ်စတာ ကော်ဖီသီးခူးဆွတ်ပြီး ချိန်တွင် ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန်များပြားသဖြင့် ရောင်းဈေးနှုန်းသည် လွန် ခဲ့သော ၅ နှစ်ခွဲအတွင်း အနိမ့်ဆုံးသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး တစ်တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃၃၉ သာ ရရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာ ကော်ဖီအဖွဲ့အစည်း (International Coffee Organization -ICO) က ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရာသီတွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ ကော်ဖီအထွက်နှုန်းသည် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ထက် ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုထွက်ရှိပြီး ၆ဝ ကီလို ဂရမ် အိတ်ပေါင်း ၂၇ ဒသမ ၅ သန်း ထွက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
Fitch Ratings သုတေသန လုပ်ငန်းကလည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ကော်ဖီ ထုတ်လုပ်မှုသည် ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာပြီး ၆ဝ ကီလိုဂရမ် အိတ်ပေါင်း ၂၉ ဒသမ ၄၂ သန်း ထွက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ရိုဘတ်စတာကော်ဖီအများဆုံး စိုက်ပျိုးသော ဒါးလက်ပြည်နယ်တွင် ၆ဝ ကီလိုဂရမ် ရိုဘတ်စတာကော်ဖီ တစ်အိတ်၏ ဈေးနှုန်းသည် ဗီယက် နမ်ငွေ ဒေါင် ၃ဝ၆ဝဝ မှ ၃၁ဝဝဝ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၇ မှ ၁ ဒသမ ၃၉) သာ ရှိသဖြင့် ၂၆ လအတွင်း အနိမ့်ဆုံး ဈေးဟုဆိုသည်။ ဟိုချီမင်းမြို့တော်တွင် ရှိသော နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ကုန်သည်တစ်ဦးက ''ပြည်တွင်းမှာ ဈေးနှုန်းကျ ဆင်းနေတဲ့အတွက် ရိုဘတ်စတာ ကော်ဖီစေ့ အရောင်းအဝယ်ဟာ ကောင်းပါတယ်။ ပရီမီယာ အမျိုး အစားရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိဘူး''ဟု ပြောပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လစဉ်ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအရ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ တစ်လအတွင်း ကော်ဖီစေ့တင်ပို့မှု သည် တန်ချိန် ၁၄၉ဝဝဝ ရှိသဖြင့် ယခင်နှစ်ကထက် ၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုး မြင့်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ ပြည်ပသို့ ကော်ဖီစေ့တန်ချိန်ပေါင်း ၄၈၆၆ဝဝ တင်ပို့ခဲ့သဖြင့် ယခင်နှစ် အလားတူ ကာလထက် ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာသည်ဟု သိရသည်။ တခြား ကုန်သည်တစ်ဦးကလည်း ''ကော်ဖီ၏ အရည်အသွေးက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်္ဘော တင်တဲ့အခါ ယခင်နှစ်တွေက လက်ကျန်အဟောင်း ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ရောနှောပြီး ထည့်ပေးကြတယ်''ဟု ပြောပါသည်။ သို့သော် ဗီယက်နမ် အရာရှိများက ပြည်တွင်းတွင် ကော် ဖီဝယ်ယူသောက်သုံးသူဦးရေသည် တိုးတက်များပြားလာသဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ကော်ဖီစေ့တန်ချိန် နှစ်သိန်းငါးသောင်းခန့် ဝယ်ယူပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆိုင်များ၊ အိမ်များတွင် အသင့်သောက်သုံးနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနိုင်သဖြင့် လက်ကျန် နည်းသွားသည်ဟု ထောက်ပြထားပါသည်။
Ref: “Vietnam Coffee Sales Quicken: Export Volume Seen up” By Ho Binn Minn (Reuters).
No comments yet...be the first to comment
View All (0) comments
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.